Maxkamadda gobolka Hargeysa oo Xayirtay xarunta womens’ club-ka ee ay xukuumaddu Iibisay. |
Maxkamadda gobolka Hargeysa oo Xayirtay xarunta womens’ club-ka ee ay xukuumaddu Iibisay.
Hargeysa(GNN)- Maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa manta soo saartay Amar ay ku Xayirtay xarunta Womens’ club-ka Hargeysa oo ay xukuumaddu Iibisay, waxaanay Maxkamaddu Amartay in aanu Iibkaasi sharci ahayn.
Garsooraha soo saaray Amarka Xayiraada ah ayaa sheegay in xarunta Womens’ Clubku ku jireen ay tahay xaruntii ugu horaysay ee ay Maxkamadda gobolka Hargeysi yeelato, iyadoo uu Garsoorihii ama Qaadigii ugu horeeyey fadhiistay 1905-tii.
Maxkamadda ayaa ku dooday inaan dhulkaas laga qaban Karin wax shaqo ah, illaa iyo Amar danbe, waxaana saaka iyo shalay ba kormeeray xaruntaasi garsoorayaal ka socday Maxkamadda, kuwaas oo qiyaasay dhulka ay xaruntaasi ku fadhido.
Illaa hada ma cada shakhsiga laga Iibiyey xaruntaasi, hase yeeshee waxa lagu war helay boodh ay ku xardhan yihiin erayo iyo Astaamo shirkadda SOMCABLE ay leedahay, taasoo caddaynaysa in Parking ay shirkadaasi ka dhiganayso.
Inkasta oo ay sidaas tahay, hadana waxa soo baxaya warar iyo tuhumo kale oo muujinaya in xaruntaas laga iibiyey dad kale oo aan illaa hada soo shaac bixin, isla markaana lagu Raad-joogo.
Xukuumadda ayaa dhigtay xaruntaasi ciidamo ilaaliya amaanka maadaama ay dadweynaha Reer Hargeysa aad u hadal hayaan iibka dhulkaasi oo ay ku tilmaameen in uu yahay sharci daro.
Xarunta la Iibiyey waxa ku shaqaysan jiray hay’addo kala duwan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Dugsiga 17-ka May ee Xildhibaan Xasan Cawaale, Dugsiga Cunta karinta ee Haweeya, Meherado yar yar oo ay hay’adda IPRT ku Maal-galiso Dumarka, hase yeeshee waxa la sheegayaa in dadkaasi la kala basriyey oo qaarkood na wax loogu bedelay, kuwa kale na banaanka la dhigay.